Ukususa amafayela amaningi kalula nge-MC: Ingxenye 2 | Kusuka kuLinux
Ngonyaka edlule Ngibhale udaba lapho kukhombise khona ukuthi, sesha, ukhethe futhi ususe kanjani amafayela amaningi usebenzisa i- Umphathi wamaphakathi nobusuku, noma njengoba iningi lethu likwazi: MC.
Kulesi esinye isihloko sizokwenza inqubo efanayo (ngakho-ke sisebenzisa ngokunenzuzo futhi siyivuselele), kepha ngizokukhombisa ukuthi ungayihlunga kanjani, uyikhethe futhi uyiqede imiphumela ngokuya ngesimo esithile.
Ake siye enkingeni. Sivula ukuphela bese singena nge MC kudivayisi USB, ezobizwa ngokuthi I-FlashDriver, futhi izofakwa phezu / isigamu isibonelo:
Manje ake Izinsiza »Thola Amafayela
futhi ithi kuphi Amadokhumenti sisusa ifayela le- * bese sibeka igama lalokhu esifuna ukukususa, ngokwesibonelo Izithupha, amafayela anenzondo akhiqizwe yi- Windows.
Singasebenzisa ama-asterisks ukuhlunga usesho, ngokwesibonelo: * Izithupha o Izithupha *.
Ngezithombe eziyizibonelo ngisebenzise igama ubuntu. Kumele kuqashelwe ukuthi ngeke kufane nokusesha ubuntu que Ubuntu. Imiphumela iboniswa ngale ndlela elandelayo:
Manje sibeka inketho: Letha kuphaneli
futhi njengoba ubona esithombeni ngenhla, wonke amafayela atholakele abekwe kuphaneli lesobunxele. Manje nokhiye Faka sikhetha konke. Ngemuva kwalokho siyacindezela F8 sekuvele kusuliwe.
Kuze kube manje engikukhombisile endatshaneni endala, kepha sizoyikhulisa kancane, senze kube lula ngathi ukuthi sisule. Masithi ngiseshe zonke izithombe enginazo ngaphakathi kwifolda ezinefomethi .JPG. Sithola into enjengale:
Umphumela ubuyisele inqwaba yezithombe engingazidingi. Masithi ngifuna kuphela ukukhetha ukususa, ukuhambisa noma ukukopisha zonke izithombe ezinegama egameni lazo Android.
Ngalokhu siya Kumenyu Ephakeme ( F9 ) »Ifayela» Khetha Iqembu ( + )
Sibhala * I-Android * nama-asterisk:
Futhi ngokuzenzakalela wonke amafayela ahlangabezana nale mfuneko ayakhethwa:
Manje sesingazisusa, sizihambise noma sizikopishe. Futhi singenza i-Inverse Selection ( * ). Futhi ngomumo!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ukususa amafayela amaningi ngendlela elula nge-MC: 2nd Part
I-athikili enhle kakhulu! Imininingwane kuphela ukuthi ngemuva kwe- "Letha kuphaneli" futhi uma ufuna ukususa konke okutholakele, esikhundleni sokukhetha ngakunye ngokhiye we-Insert, mane ucindezele ukhiye * bese ukhetha konke ngasikhathi sinye.
* Khetha amafayela kuphela, hhayi izinkomba. Ukususa izinkomba kuphela, ungenza okulandelayo: «+ Enter *»
Ngemuva kwalokho u-F8 ukusula ukukhetha.
Susa izithupha eziphindaphindekayo kuhla lwemibhalo: find ./ -name "Thumbs.db" -print0 | xargs -0 rm
Othile uhlala enikela nge-Thola ukuphawula, kwenzeka okufanayo nokuthunyelwe kwangaphambilini .. kepha woza, uzongitshela ukuthi kulula, uma usebenzisa i-MC, noma uzama ukukhumbula umyalo, ngamapayipi ayo nabanye hahaha
Andres Martinez kusho
Sanibonani nonke, ngifaka kanjani i-irc kusuka ku-desdelinux.net?
Phendula u-Andres Martinez
Okwamanje ayixhunyiwe ku-inthanethi 🙁
Ukukhubaza i- "Distinguish may / min" inketho ukuze i- "ubuntu" ilingane ne- "Ubuntu" (Case Sensitive)
<º Imidlalo: Ugibe lweVerminian